Qeerroo Bilisummaa Oromoo: Waamicha birmaannaa. |
Qeerroo Bilisummaa Oromoo: Waamicha birmaannaa.
Duula duguuggaa wal irraatti ilaaluun umurii gabrummaa nurraatti dheeressuu bira darbee badii saba oromoo habashoonni abjootaa turaan dhugoomsa.
Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Amajjii 07, 2020
Roorroo fi roorrisaan biyyaa itophiyaa jedhaamtu tana keessaatti addaatti qooduun saba oromoo irraatti aggaamamee gaggeeffamaa jiruu yoo xiqqaate waliitti fufiinsaan waggoota 150 oliif adeemsifamaa jiraa. Abjuun miniilik jaarraa tokkoon duraatti abjootaa turee yeroo kanatti bifaa ifaa fi dhokataa ttahen saba oromoo irraatti dhugoomfamaa jiraa. Karaa tokkoon Oromoon of waamaa gama kaaniin ammo duula qoqqoodanii bituu diinota oromootiin kalaqamee saba oromoo irraatti hojiirra oolchaa jiruu. Karoora diinaa tarsiimoo waggaa dheeraaf ittiin saba oromoo xiqqeessanii gad qabuun ittiin bitaa turaan kana sabni oromoo ol jedhee tokkummaan fuunduraa dhaabbachuun driqaama.
Rakkoon oromoo itoophiyaa rakkoon itoophiyaa ammoo itoophiyaanoota tahee osoo jiruu saba oromoo kutaaf lagan qooduun humna saba tokkoo laaffisuuf bittaa umurii faashistummaa isaanii dheereffaachuuf karoora diinummaa gaggeeffamaa jiruudha. Rakkoon akkanaa kun durii jalqabee saba oromoo muudataa har’aa gahee, garuu uummaanni oromoo kan darbee irraa barachuu dadhabuudhan yeroo hedduuf carraa eebbifamaa of jala dabarsaa tureera. Bara bulchiinsa oromoota Jejjuu irraa eegallee yoo ilaallee gabromuuf akkasumaas diinaaf jilbeenfachuu oromoof sabaabni guddaan hubaannoo oromoo turee. Kana keessatti oromoon rakkoo boruu isa muudaatu of duraatti ilaaluu dhiisnee kan har’aa qofaa wayyeeffachuun obbolootaan keenya ona fi godiina olla keenya jiraan rakkoo isaan muudaate birmaachuu caala waan keessaa jirruu fudhaannee calliisuun sabaaba balaa kanaati. Irraa deeddebiin kan oromoo gidduutti mul’aachaa turee rakkoo kanaadha. Rakkoon kun bu’aan isaa gadaadfamuu, hacuucamuu, qoodamee bitaamuu fi kkf tahee kunoo rakkoo haaraa amma keessa jirruu kana keessatti kufne.
Har’aa oromoon maal keessa jiraa jennee yoo ilaalluu deebisuuf ni ulfaata waggaa tokkoof ji’aa yeroo fixnee kana keessaatti labsii waraana ulaagaa heera biyyaa fi addunyaa falleessuun kan deeggaarsa seera hin qabnee keessaatti; lubbuun danuun baddee, qabeenyi barbadaa’ee, mirgii namoomaa fi diimokiraasii uummaata oromoo mulqamuun sarbaamee, gochoonni nfarraa namummaa saba oromoo irraatti dalaagamanii, tajaajillii bu’ura hawaasa uummataa tokkoof jiraachuuf isaa barbaachisuu irraa kutaamee, haala dubbaachuun ulfaatuun summii ykn keemikaallii farraa lubbuu qabeeyyiif uumaama naannoof farraa tahee biifamee, walumaa galaatti biyyii oromoo gartokkeen ibiiddi itti qabsiifamee gubaataa gubaa keessa turree. Rakkoon kun guyyaa jalqabee naannoo maqaa sakaattaa WBO jedhuun haa eegalamuu malee akeekni isaa saba oromoo balleessuf kan xiyyeeffatee waan taheef ammaan kana guutuu oromiyaa wal gahuutti jiraa. Addaatti ammo duulli kun lixaa fi kibbaa oromiyaa keessaatti ukkaamsaa sagalee uummaata waliin wal qabsiifamuun bakka ijii miidiyaa fi dhaabbilee mirga namoomaa hin argiineetti akkaan hammaatee bifa namuummaa keessaa baheen duguuggaan gaggeeffamaa jiraa. Kuniis hanga haadhaaf intaala wal biraatti waraana mootummaan gudeedamuutti, hanga dhallii namaa manni itti cufaamee manaa waliin gubaachuutti, hanga du’aan akka hin awwaalamnee dhorkaamee reeffi bineensi hanga nyaatuu gaheetti jiraa. Aggaammiin kun diinaa innikkaa saba oromootiin nurraatti aggaamamuus waliif birmaachuu dhabuun keenya akkasumaas rakkoo naannoo tokkoof dubbaachuu dhabuun keenya rakkoon kun akka humna godhaatu taasiise jira.
Seenaa keessaatti akkuuma hubaanneetti sabni oromoo gaafa wal tahiinsaan irree tokkoon falmaataa turee diinoota isaa harkaa kennaachisuun gabbaarsiisaa turee, maddaa nagaaf gammaachuu godiina gaanfa afrikaa tahuun wabiinuummaattootas tahaa turee. Kanaaf ammaas kan nutii qaawwaa ofiitti banneen diinni akka nu madeessaa jiruu hubaachuun hawaasni oromoo bakka jiruu waliif iyyuun uummaata keenya rakkoo hamaa fi zaliili keessa jiraaniif akka birmaannu Qeerroon Bilisummaa Oromoo waamichs isiniif dhiheessa. Yeroo kanaatti oromoon bakka bakkaatti facaafamuun tarsimoon diinaa dhugoomee sabnii oromoo gabrummaa hadhooftuu keessaatti kufee jiraa. Keessaayyuu lixa oromiyaa godiinaalee wallaagga 4n fi kibbaa oromiyaa gujii 2n keessaatti roorroo hiraarsaa duguuggaa fi saamichi humnaan olii labsaamee jiraa. Itti qabaanni isaa waraana bilisummaa oromoo WBO barbaacha maqaa jedhuun kan bobbaafamaan waraanni EPP hojiidhaan garuu duguuggaa sanyummaa saba oromoo irraatti gaggeessaa jiruu. Xiyyaaraan haleellaan dhala namaa irraatti guyyoota darbaan kana adeemsifamaa jiraa, uummaanni oromoo innii gaafa rakkoof dhiphuu kana xcaaluu waliin dabarsiite, qeerroon oromoo rakkoo darbaan waliin dhamdhamnee, uummaanni gammaachuu waliin qooddannee kun rakkoo kanaas sagaalee fi humnaa waliif tahuun keessaa waliin haa baanuun waamiicha keenya dhiheessinaa.
Qeerroon Bilisuummaa Oromoos akeekni isaa innii duraa tokkummaa saba oromoo diinota fi shira diinotaatiin barootaaf sharaafuu fi balleessuuf nurraatti hojjatamaa turee fi diinni ittiin nu bitaa turee jabeessuun itiichuudha. Qabsoon QBO gaggeessaa turees labaata oromoo oromummaa fi oromiyaa ijaaru horuudha. Kanaafuu rakkoon nurraa gahaa jiruu kan saba oromoo diiguun dhabaama sabummaa oromoo habashoonni abjootaa turaan dhugoomsuu waan taheef aggaammii duguuggaa kana wal tahiinsaan akka dura dhaabbannuu uummaata oromoo bal’aaf waamiicha dhiheessinaa. Bakkuuma jirruutti oromoon kamiyyuu 09/01/2020 ykn 01/05/2012 ganaama irraa eegaluun diddaa gabrummaa, sagaalee dhageessifannaa, hokkoora diddaa fi tarkaanfii of ittiisaa akka waliin fudhaannuu maqaa qabsa’oota nuuf aarsa tahaanii asiin nu gahaaniitin waamicha isiniif dhiyeessinaa.
Rakkoo keessa jirruu keessaa kan baanu waltahiinsaan sagaalee waliif tahuudhan roorroo nurraa jiruu addunyaatti waliif dhageessiisuun yoo tahee malee walirraatti ilaalaa tarsiimoo gabroomsaan ittiin nu bituuf baafateef karaa banuun gabrummaa caaluuf nu saaxiluuf deema. Sabni oromoo rakkoo kana keessaa bahuuf qabsoo hadhooftuu walirraa cinnee gaggeessuun gabroomfattoota diigaa akka as gahee ammaas akkanumaan diddaa isaa tokkuumnmaa isaa tiksaa gaggeessuun dirqaama. Sagaalee waliif haa taanu waliif haa birmaannuu.
Diinni goduu oromoo tokkoo xuqee goduu oromoo hundaa xuqee.
Injifannoon Uummaata Oromoof.
Previous articleየሲዳማ ዳያስፖራ ማህበር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሰጠው መግለጫ
Next articleItoophiyaa: Lixa Oromiyaarraa bilbillii fi interneetii maaliif uggurame?